कृषिको पकेट क्षेत्र बनाउँछौँ – वडा अध्यक्ष सापकोटा
By vijayafm on	 July 25, 2017 अन्तरवार्ता, फोटो फिचर, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
वि.सं. २०३६ सालबाट राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्नुभएका गैँडाकोट ६ का वडा अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले सामाजिक जीवन भने विजय युवा क्लब (अहिलेको विजय विकास स्रोत केन्द्र) बाट सुरु भएको हो । जनप्रतिनिधि भैसकेपछि पनि अझ बढी समाजिक काममा होमिनु जीवनको सबै भन्दा खुसीको क्षण सम्झने सापकोटाले वाड नं. ६ लाई कृषि क्षेत्रको नमुना वडा अर्थात कृषिको पकेट क्षेत्र बनाउने योजना बनाउनुभएको छ । कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा वडाका विकासका के के योजना छन् ? यसै सन्दर्भमा सापकोटा संग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ सम्पादक श्रीधर उपाध्याले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ।
हिजोआजको व्यस्तता चाँहि के छ ?
जनताको काममा नै हिजो आजको व्यस्तता रहेको छ ।
जनताको काम गर्दा कस्तो महशुस भएको छ ?
महशुस राम्रै भएको छ । सबै जनतासंग भिज्न पाउने । जनतासंग नजिकको सम्बन्ध त छँदै थियो अझै प्रगाढ बन्ने रहेछ ।
वडाको विकासका लागि अधिकार काफि छ ?
वडाका विकासका लागि प्रत्याभूत अधिकार काफि छन् जस्तो लाग्छ । अहिले हामी सिकाईको प्रथम चरणमा समेत रहेका छौँ यस कारणले पनि धेरै अधिकार एकै पटक प्रयोग गर्नुभन्दा अहिलेका अधिकारको नै उचित प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ जस्तो लाग्दछ ।
वडा अध्यक्ष हुनुपूर्व र अहिलेको लक्ष्मीजीको जीवनमा के फरक छ ?
फरक धेरै कुरामा त महशुस भएको छैन । तर कामको जिम्मेवारीले अलिकति अहिलेको जीवन बोझिलो महशुस गरेको छु । यस अघि पनि विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा रहेर काम गर्दे गर्दा पनि सदस्य देखि लिएर अध्यक्ष जस्तो पदमा बसेर काम गरिसकेको छु । त्यस वखबतको अभ्यासले अहिले केही सहज भने बनाएको छ ।
आफ्नो वडाको विकासका लागि कस्तो सपना देख्नुभएको छ ?
सुविधा सम्पन्न, प्रदुषण रहित र वातावरण मैत्री वडा बनाउने सपना देखेका छौँ । यसमा हामी सफल हुन्छौँ जस्तो पनि लागेको छ ।
यी सपना पुरा गर्नका लागि वडामा के कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?
केही समस्याहरु छन् वडमा त्यसलाई पहिचान समेत गरेका छौँ । विद्युतका समस्या, बाटोघाटोका समस्या, तटबन्धनको समस्या, सुकुम्बासीका समस्या, जंगली जनावरको समस्य र केही खानेपानीको समेत समस्याहरु अहिले देखिएको छ ।
बाटोघाटोका सन्दर्भमा के के योजनाहरु अघि बढाउनुभएको छ ?
हामीले कार्ययोजनामा तत्कालिन, दिर्घकालिन र अल्पकालिन भनेर तीन भागमा छुट्याएका छौँ । पूर्वाधारका कामहरु प्राथमिकताका आधारमा गर्ने सोच बनाएका छौँ । पाँच वर्षभित्रमा बाटोघाटोहरु सुविधा सम्पन्न बनाउने योजना बनाएका छौँ ।
तत्कालिन बनाउनुपर्ने बाटोहरु चाँही कुन हुन ?
भाग्योदय चोक देखि शिवमन्दिरसम्मको बाटो पिच गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ । गँैडाकोट ६ राइटोलको बाटो समेत पीच गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसैगरी गैँडा चोक देखि आवाससम्मको बाटो पीच गर्ने भनेका छौँ ।
दीर्घकालिन योजनामा परेका बाटोहरु कुन कुन हुन् ?
दीर्घकालिन योजनामा एउटा रिंग रोड बनाउने भएका छौँ । यो रिंग रोड वाड नं. २ देखि राम मन्दीर पुग्छ, नारायणी किनार हुँदै सात नम्बरमा जोडिन्छ । अरु साना तिना स्तरोन्नती गर्नुपर्ने बाटोहरुलाई अल्पकालिन योजनामा राखेका छौँ ।
नारायणी तटबन्धनको समस्याको समाधानका लागि के योजना बन्दै छ ?
तटबन्धनका लागि विभिन्न निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरेका छौँ । जनताको तटबन्धनको काम पनि भैरहेको छ । यसको निरन्तरताको लागि पनि पहल गर्ने भनेका छौँ ।
बत्तिको समस्या पनि छ तँपाईको वडामा, कति घरमा विजुली पुगेको छैन ?
हाम्रो वडामा केही बस्ती अध्याँरोमा बसेका छन् । यस्तै २० देखि २५ घरधुरीमा बत्ती पुग्न सकेको छैन । सुकुम्बासी समुदायमा पनि बत्ति पुग्न सकेको छैन । तर हामीले यो समस्या समाधान गर्न उज्यालो वडाको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छोैँ ।
सबै ठाँउमा विद्युत पु¥याउनकालागि कति वटा पोल आवश्यक पर्ला ?
हामीकहाँ ५० वटा पोल भयो भने तत्कालका लागि अहिलेको समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
सुकुम्बासीको समस्य पनि उस्तै छ नी है ?
हो सुकुम्बासी समस्याका लागि वडाबाट गर्न सकिने पहल भने हामी गर्ने छौँ । सकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि त नितिनियम माथिल्लो निकायले बनाउने हो । हाम्रो तर्फबाट उहाँहरुलाई दिने सेवा सुविधाका रुपमा पानी बत्ती, विजुली, बाटोघाटोको व्यवस्था चाँहि हामी मिलाउने छौँ कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ ।
वातावरणमैत्री वडा बनाउँछौँ भन्नुभयो, यो चाँहि कसरी बनाउने हो ?
यसको लागि स्वच्छ, सफा, वातावरणमैत्री नगर निर्माणका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन पहिले गर्दछौँ, हरियाली बनाउनकालागि विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण गर्नेछौँ । यस्तै एक घर दुई विरुवा लगाउनुपर्ने हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ ।
विगतमा जंगली जनावरका कारण तीता घटना घट्ने गरेका छन् । जंगली जनावरण नियन्त्रणका लागि के छन् योजना ?
यसका लागि हामीले सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गर्ने भनेका छौँ । जनावरको नियन्त्रणकालागि राष्टिय निकुञ्जजस्ता सम्बन्धित निकायमा घटना भएपछि मात्रै होइन, हामीले पहिलै नगरपालिका मार्फत समस्या समाधानकालागि छलफल गर्नेछौँ । यसको प्रतिवद्धता समेत जनाउँछु ।
वडालाई समृद्धितर्फ लिएर जाने आधार के हो ?
विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण, गरिब बिपन्नलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, बेरोजगार र अपांगलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, गैँडाकोट ६ लाई कृषिको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने छौँ, आवश्यक सिंचाई र आवश्यक विउविजनकालागि समन्वय गर्ने काम हामीले गर्नेछौँ । बोरीङनभएका स्थानमा सिंचाईको व्यवस्था मिलाउने छौँ । यसक्षेत्रलाई मकै खेतीको पकेट क्षेत्रको रुपमा र अर्गानिक तरकारीको उत्पादनका लागि हामी किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ । उत्पादनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्यौँ भने हामी समृद्धि तर्फ जानेछौँ भन्ने विश्वास र योजना समेत बनाएका छौँ ।
दुव्र्यसनीको समस्याले वाड नं. ६ ले सताएको छनी ?
हो, यहाँले ठीक भन्नुभयो । वाड नं. ६ लाई सताएको छ योसमस्या चाँही देशकै समस्या पनि हो । यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । यसकालागि हामी इलाकाप्रहरी कार्यालय गैँडाकोटसंग समन्वय गर्नेछौँ साथै जनचेतनाका कार्यक्रम समेत गर्नेछौँ । हाम्रो वडामा नारायणीको किनार र अवास क्षेत्रमा यस्तो समस्या देखिएको छ ।
खानेपानीको पनि समस्या छ नि ?
सुरक्षित खानेपानीको समस्या वाड नं. ६ मा रहेको छ । अहिले पिउने पानीको रुपमा बढी इनार र कुवाको प्रयोग हुने गरेको छ । पानीलाई सुरक्षित कसरी गर्ने भन्ने सोच बनाउँदै छौँ । अहिले गैँडाकोट पम्पीग स्कीमको र विजय नगरको खानेपानी वडा बासीले प्रयोग समेत गरेका छौँ । यी दुई संस्थाको सहयोग प्रशंसा योग्य नै छ । हाम्रै वडामा रहेको विजय नगर पनि निर्माणधिन अवस्थामा रहेको छ । यसको परिपूर्ण संगसंगै खानेपानीको समस्या पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । विजय नगरको स्तरउन्नतीकालागि आर्थिक रुपमा केही सहयोग गर्ने समेत सोच बनाएका छौँ ।
वडा कार्यालय अहिले छैन, वडा बासी के भन्छन् ?
अहिले हामी सिकाई प्रक्रियामा रहेका छौँ । अहिले नगरपालिकामा रहेर काम गर्दा सबै कुरा बुझ्ने र सिकाई प्रक्रियाका लागि सहज भएको छ । सिकाई प्रक्रियापछि केही समयमा नै हामी वडामा आउने छौँ । हामीले वडा कार्यालयको सोच बनाएका छौँ । जग्गा पनि हेरेका छौँ ।
कहाँ छ जमिन ?
एउटा जमिन चाँहि भाग्योदय स्कूलको अगाडि रहेको छ अर्को शिवनगर खानेपानीमा भवन समेत रहेको छ । पछि छलफल गरेर यी दुवै स्थानमा कुन उपयुक्त हुन्छ त्यहँीबाट वडा कार्यालय संचालन हुनेछ ।
हुन्छ समय र विचारका लागि धन्यवाद,
हवस्, मेरा आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो विजय खबर पत्रिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
ग्यास सिलिण्डर पड्किँदा एकको मृत्यु
vijayakhabar @ 7pm 2075-10-2
January 16, 2019 | 26 min 46 secs
Vijaya khbar @ 6.30 AM 2075-10-02
January 16, 2019 | 26 min 29 secs
Vijayakhbar @7PM 2075-10-01
January 16, 2019 | 30 min 33 secs
Atithi debo bhawa final 10-01 & 02 ko lageee manju chepang
January 16, 2019 | 12 min 1 secs
खबर खोज्नुहोस Select Month January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 July 2015
सम्पादकीय ढाकाटोपी नेपालबाटै नहराओस् मेरो टोपी कैलाशको शिरजस्तो मेरो टोपी हिमाली भीरजस्तो कहिल्यै पनि झुक्न…
सार्वजनिक सुनुवाईको अभ्यास गरौँ
मुख्यमन्त्रीका कुरा सुन्नुपर्छ
चितवन महोत्सवमा विभिन्न शिर्षकका गोष्ठी तथा सेमिनार आजबाट
चार दशकको अनुभव संगाल्नुभएका चेतनाथ भुषाल भन्नुहुन्छ “ गैँडाकोट शैक्षिक नगर बन्न सक्छ”
समाजमा परिर्वतन ल्याउन उल्टो दिशामा पनि बहन सक्ने क्षमता हनुपर्दछ – पूर्व डिआइजी खरेल
गैंडाकोट शैक्षिक हब बन्छ ः विनोदी
कवि शिरोमणिको स्मरणमा कविता वाचन
चितवन महोत्सव ः मञ्जिल र रामको जोडीले जित्यो बिच भलिबलको उपाधी
कविवर गोविन्दराज विनोदीको नागरिक अभिनन्दन (फोटो फिचर)
रत्नराज्य लक्ष्मी मा.बि.गैडाकोटको स्वर्ण महोत्सव/आज अभिभावकवीच अतिरिक्त क्रियाकलाप
चितवन महोत्सवमा आज मेरी बास्सैका कलाकारको प्रस्तुती रहने/आधुनिक गित प्रतियोगिता आजपनि
१२ औं संस्करणको चितवन महोत्सवको आज दोस्रो दिन/१० वर्षमा देशलाई समृद्ध बनाउछौँ : अध्यक्ष प्रचण्ड
आलु उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले थप ११ वटा कोल्डस्टोर बनाउने
भारतबाट दसैं, तिहारलाई ६० करोडका खसीबोका ल्याइँदै,२० प्रतिशतमात्र स्वदेशी उत्पादन
गैंडाकोटमा उत्पादित दुधको बजारीकरणमा समस्या
दुई खेलाडीलाई कारवाहीको माग
बिपद्बाट नेपालमा ४६ वर्षमा ४६ हजारको जनाको ज्यान गयो ।
एक्काइसौँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस आज/सरकार सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा ः प्रधानमन्त्री ओली
चितवन महोत्सवमा आज (कार्यक्रम तालिका सहित)
नेविसंघ विवाद ःदोस्रो पटक थप भएको म्याद आज सकिदै/तत्काल तदर्थ समिति बनाऔँ ः सहमहामन्त्री शर्मा
एम्बुलेन्स नचल्दा सेवाग्राही मारमा
चितवन महोत्सवको सातौँ दिन सम्म दुई लाख बढी दर्शकद्धारा अवलोकन/ दोहोरी प्रतियोगिताको सेमिफाइनल चरण सकियो (फोटो फिचर)
सनराइज बैंकको अध्यक्षमा दुगड
सिस्नु हानाहान गरी सङ्क्रान्ति मनाउँदै
गुल्मीमा आगोमा जलेर एक जनाको मृत्यु
तनहुँमा होटल तथा रेष्टुरेन्टको वर्गीकरण शुरु
देवघाटमा पौडी खेल्ने क्रममा गैँडाकोटका एक युवा बेपत्ता
Chair Dahal for enhanced national unity and good will
राष्ट्रिय एकता र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने अध्यक्ष दाहालको अपेक्षा
चितवनका स्थानीय तहमा गुनासो
माघीमा माघ २ गते सार्वजनिक बिदा
नवलपरासी जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको २४ औं साधारणसभा सम्पन्न
‘गर्भनिरोधका साधनको प्रयोगबारे जनचेतना आवश्यक’
मुख्यमन्त्री राईको शूभकामना
डा केसीको अवस्था जटिल
देवघाटमा माघे संक्रान्ति मेला जारी/ मेलाको विजय एफएमद्धारा प्रत्यक्ष प्रसारण
चितवनमा बोलेरोको ठक्करबाट दुईको मृत्यु
सात महिना देखि पार्टी एकता पक्रिया अघि बढेको छैन – बरिष्ठ नेता नेपाल
भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी बस्दैनन्, सर्वसाधारणबाटै काम हुन्छ
जडीबुटी व्यवसायी अध्यक्षमा अन्सारी निर्वाचित
नेकपा गैडाकोटले आज प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दै
मन्त्रीले सचिवलाई कुटपिटको आरोप
चितवन महोत्सवको पाँचौं दिन ३५ हजार दर्शकद्धारा अवलोकन/ आजै पर्यटन गोष्ठी पनि सम्पन्नः
लागुऔषध कारोवारमा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जना पक्राउ
प्राज्ञसभाका सदस्यको शपथ
A Station Manager : Shreedhar Upadhyay ( 9855051802)
News Chief & Programme Chief : Prem Kshetri ( 9855056802)
Accountant : Srijana Regmi (078-501404)